IMaldives ngoku lilizwe lama-128 kwinethiwekhi yoKhenketho lweHlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeMaldives Breaking » IMaldives ngoku lilizwe lama-128 kwinethiwekhi yoKhenketho lweHlabathi
Ukubambisa • ICTP • Iindaba zeLuxury • Iindaba zeMaldives Breaking • iindaba • abantu • Cinezela iZaziso • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 14, 2021
I-Maldives Integrated Tourism Development Corporation (MITDC) yamkelwe kwiNethiwekhi yezoKhenketho yeHlabathi (i-WTN) njengeLungu le-128 leNdawo yokuFikela. Injongo ye-MITDC kukudibanisa ukhenketho olusekwe eluntwini eMaldives kunye nokuzisa ukhenketho lwesiqithi sendawo kwiindawo eziphakamileyo.
The IQumrhu loPhuhliso lwezoKhenketho eMaldives (MITDC) yi-100% yoRhulumente waseMaldivian i-SOE egunyazisiweyo ukuba ixhase kwaye ikhuthaze ukukhula kunye nokukhula kwecandelo eliphakathi lentengiso loShishino lwezoKhenketho.
IZiko laseMaldives eliHlanganisiweyo loPhuhliso lwezoKhenketho njengoko ligunyazisiwe ngumlawuli ophetheyo U-Mohamed Raaidh Ujoyine i Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi (WTN) njengeLungu lokuFikela lakutshanje.
IMaldives ijoyine iNethiwekhi yezoKhenketho yeHlabathi (i-WTN), isenza le paradesi yezokhenketho ilizwe le-128 likhokela lo mbutho.
umlawuli U-Mohamed Raaidh ibindwendwelwa rhoqo iingxoxo ezininzi zehlabathi by ukwakha kwakhona iququzelelwe yi-World Tourism Network.
Phantsi kobunkokheli buka Mnu. Raaidh iMaldives Integrated Tourism Development Corporation ngoku iyinxalenye yale ngxoxo ibalulekileyo yelizwe njengelungu le-WTN.
Ngokujoyina iMITDC, iRiphabhlikhi yaseMaldives nayo yaba lilizwe le-128 elinamalungu kwi-WTN.
Usihlalo weNethiwekhi yoKhenketho kwiHlabathi uJuergen Steinmetz uthe:
“IMaldives iphefumla uhambo nokhenketho. Ndibe novuyo lokuya eMaldives amaxesha amaninzi kule minyaka ingama-30 idlulileyo.
“IMaldives ngaphandle kwedoupt yenye yezona ndawo zintle zolwandle kunye neendawo zokuntywila emhlabeni. IMaldives eneehotele ezikumgangatho ophakamileyo ezisasazeka ngaphezu kwamakhulu eziqithi zikwayindawo efanelekileyo yokugcina ukudideka ekuhlaleni xa usungula kwakhona indawo yokuhamba nokhenketho ngokukhuselekileyo.
Uthungelwano lweHlabathi lezoKhenketho lonwabile ukusebenza noMITDC kwaye bayaqhubeka nokusebenza no-Mohamed Raaidh. U-Mohamed sele ebubuso obuqhelekileyo kwiingxoxo zethu eziqhubekayo.
“Ngoku sithanda ukumema abathathi-nxaxheba eMaldives, kwiihotele, kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, kwiindawo ezinomtsalane, nakwizikhululo zeenqwelo moya ukuba bazokujoyina inethiwekhi yethu.
“I-WTN iye yangumkhosi okhokelayo kwihlabathi lezokhenketho nokhenketho, ingakumbi kumashishini amancinci naphakathi azimeleyo kwezamashishini ehlabathini.
Uninzi lwemibutho elolu hlobo ibekwe eMaldives ngokufanelekileyo ibonisa le nkangeleko. Wamkelekile eMaldives! ”
The IQumrhu loPhuhliso lwezoKhenketho eMaldives (MITDC) wathi:
Injongo yethu ephambili kukuzisa uhlumo kuqoqosho ngokwandisa iindlela zecandelo lezokhenketho ngophuhliso olucwangcisiweyo nolucwangcisiweyo lokhenketho olumanyanisiweyo kweli shishini.
Ukwenza iyantlukwano ekhulayo kwezokhenketho kunye nomoya wokubuk 'iindwendwe eMaldives, urhulumente waseMaldivian ujonge ekuphononongeni ukubanakho kokungena kwimakethi yaphakathi yezinga lokhenketho ekhulayo ngoku eMaldives. Ngaphantsi kweli nyathelo, urhulumente waseMaldivian uqalise ukuphuhlisa umxholo wokhenketho oluhlanganisiweyo eMaldives.
U-Mohamed Raaidh, umlawuli we-Maldives Integrated Tourism Development Corporation (MITDC)
Ngokuchasene nengcinga yesiko lesiqithi esinye-sokutyelela esamkelwe ziindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezikhoyo ngoku apho zonke iinkonzo zinikezelwa ngumntu omnye, sizimisele ukubandakanya abaqhubi abaliqela beshishini ukubonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo ezinje ngendlu yeendwendwe, amaziko oluntu, iindawo zokutyela, iivenkile zokutyela , Imidlalo yezamanzi, iipaki zemixholo. Oku ikakhulu kukwazisa ukubandakanyeka kunye nengeniso kumashishini endawo.
Ukongeza, yinto ephambili kuthi ukubandakanya igalelo loluntu lwasekhaya kwicandelo lezokhenketho kwaye sisonyusa uqoqosho loluntu.
Ukulwela ukugqwesa ekufezekiseni isigunyaziso sethu kunye nokuququzelela uphuhliso oluzinzileyo lokhenketho oluhlanganisiweyo kwilizwe liphela ngokunikezela ngamathuba oshishino amatsha kunye noqoqosho okwenza ukuba ii-SME zithathe inxaxheba kolu shishino, kwaye zibe ngumbutho ongumzekelo oxhasa uphuhliso lwabasebenzi kunye neqabane lobuchule kwilizwe lonke uphuhliso lwezokhenketho.
Yakha ukuchuma kuluntu lwaseMaldivian ngophuhliso oluhlanganisiweyo lwezokhenketho kwaye wenze ukhenketho lwasekhaya lwaseMaldivian lube luphawu lwehlabathi.
U-Mohammed Raaidh Uqeshwe njengoMlawuli oLawulayo weQumrhu loPhuhliso loKhenketho oluHlanganisiweyo (MITDC) ngeenjongo eziphambili zokufaka igalelo kuhlumo loqoqosho lwesizwe ngokwandisa iindlela zecandelo lezokhenketho ngophuhliso olucwangcisiweyo nolucwangcisiweyo lokhenketho oluhlanganisiweyo kolu shishino.
Umnumzana Raaidh usebenze ngokuthe ngqo nowayesakuba nguMongameli, oHloniphekileyo uGqr.Mohamed Waheed Hassan, njengentloko ye-Residence Staff Staff. Amava akhe amakhulu kummandla we-ASEAN kumazwe amenza ukuba abe ngumdlali oqinileyo kwinethiwekhi yakhe yezokhenketho, ezothutho, kunye nokungenisa / ukuthumela amashishini.
Ngaphaya koko, ngemvelaphi esebenzayo kunyanzeliso lomthetho, ukuthintela ulwaphulo-mthetho kunye nenkuthazo yezomthetho, u-Mohamed Raaidh uchithe ngaphezulu kweminyaka emi-4 ebeka ngokuqatha izikhokelo zomthetho kunye nokuyila imithetho efikelela kude.
Umbono wakhe kukudibanisa ukhenketho olusekwe eluntwini eMaldives kunye nokuzisa ukhenketho lwesiqithi sendawo kwiindawo eziphakamileyo.